Hubanti la’aan siyaasadeed oo ka dhalatay dib u dhaca doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
Hubanti la’aan siyaasadeed oo ka dhalatay dib u dhaca doorashadda
Dib u dhaca doorashudu, wuxuu dalka galiyay hubanti la’aan xooggan, waxaa taagan dhaqdhaqaaqa ganacsiga, sida dulka iyo dhismaha, waxaana sare u kacay qiimaha maciishadda guud.
MUQDISHO. Soomaaliya – Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka heer Federaal Maxamed Xasan Cirro, oo Fahad iyo Farmaajo, u dhiibeen hoggaanka Guddiga doorashooyinka, si uu u hirgaliyo damacooda doorashada, ayaa sheegay inuu soo dhammaaday diyaar-garowga doorashadda Gollaha Shacabka, lana joogo xilligii dalka oo dhan laga daahfuri lahaa.
Cirro, wuxuu kamid yahay shaqsiyaadka mas'uulka ka ah jiitanka muddada dheer, ee hannaanka doorashadda, waxaana xilliyo kala duwan fashilmay jadwal doorasho oo xaafiiskiisa kasoo baxay, waxaana taas loo aaneynayaa khibrad la'aanta iyo musuq-maasuqa guddiga oo ku daaban Madaxtooyadda.
Inkastoo horaba loo filayay in doorashadda Gollaha Shacabka aysan idlaan doonin kahor dhamaadka December 2021, hadana, walaaca ayaa sii kordhinaya maadaama ku dhawaad afar bilood lasoo af-meeri la’yahay kuraasta Aqalka sare oo 54 xubnood ka kooban, kuwaasoo labo kursiga wali uga harsan tahay Galmudug.
Madaxda Maamullada ayaa doonaya in hirgalinta doorashadda ay maalin galinked uga taajiraan, Guddiga doorashada ayaa isna middaas ku riyoonya, Farmaajo ayaa boob ku fakaraya, Mucaaradka ayaa si weyn u gaabsaday, halka RW Rooble, uusan sidii la filayay u howl-galin.
Qaar kamid ah madaxda Maamullada, ayaa geeddi-socodka doorashada u jiidaya si hannaanku u noqdo mid lagu daalo oo daba-dheerada, taas oo horseedi doonta in Kooxda Farmaajo ay xubno badan ku yeeshaan Aqalka hoose.
Dib u dhaca doorashudu, wuxuu dalka galiyay hubanti la’aan xooggan, waxaana taagan dhaqdhaqaaqa ganacsiga, sida dhulka iyo dhismaha, iyadoo sare u kacay qiimaha maciishadda.
Amniga ayaa faraha kasii baxaya, waxaana qeybo kamid ah waddanka ka holcaya coloodo laga huriyay Madaxtooyada Villa Somalia, kuwaasoo la doonayo in dib loogu dhigo doorashooyinka.
Howl-galladii ka dhanka ahaa Kooxda Al-Shababab, ayaa meesha ka baxay taasoo sababtay in hadda kooxdu weerar ku tahay degaanno aysan waligood ka arimin.
Waxaa jira dareen bulsho oo ka dhan ah geeddi-soodka doorashadda ee daba-dheeraaday, waxaana laga digayaa hannaanka nugul ee hadda wax lagu wado.